सा’वधान ! झु’क्किएर पनि यस्ता कुराहरू गुगलमा सर्च नगर्नुहोस् । – Nepal Online Khabar
भाद्र ३, २०७८ बिहिबार 287
अचेल मानिसहरू सबै भन्दा बढी मोबाइल र ल्यापटपमा भुल्छन् । इन्टरनेटको विस्तारसँगै मानिसहरूमा यो ल’त बसेको हो । त्यति मात्र नभएर उनीहरू मोबाइल तथा ल्यापटपमा विभिन्न सर्च इन्जिनहरूबाट लेखेर तथा भ्वाइसमार्फत आफू अनुकूलका सामग्री सर्च गर्छन् ।
यसबाट उनीहरूले क्षणिक आनन्द लिए पनि पर्न सक्ने जो’खिमबारे सचेत हुँदैनन् । यसरी पटक-पटक एउटै कुरा धेरै सर्च गर्ने मानिसहरूलाई अनुसन्धान एजेन्सीहरूले मनिटर गरिरहेका हुन्छन् ।एक दुई पटक बेवास्ता गर्न सक्छ तर पटक–पटक सर्च गर्नाले तपाईँलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गर्न सक्छ ।
केही सर्च गर्न नहुने कुराहरू छन् जुन गुगलमा खो’ज्नुभन्दा सम्बन्धित साइट नै खोलेर हेर्न इ’न्टरनेट सु’रक्षा विदहरुले सुझाव दिएका छन् ।जसका विषयमा जानकारी यहाँ दिइएको छ–
१.चा’इल्ड पो’र्न :पो’र्नलाई लिएर पछिल्लो समय निकै ब’हस भएको छ । भारत र नेपालमा चा’इल्ड पो’र्नसँग सम्बन्धित जानकारी राख्न र ब’ढवा दिन गैर का’नुनी हो । यदि तपाई गल्तीले चा’इल्ड पो’र्न सर्च गर्नुहुन्छ भने पनि सा’वधान हुनुहोस् ।
२.औ’षधि किनबेच :गुगल प्ले स्टोरमा धेरै यस्ता मोबाइल एप्प छन् जसबाट तपाई औ’षधि किन्न सक्नुहुनेछ । तर त्यसको लागि तपाईँले डाक्टरको प्रि’स्क्रिप्सन देखाउन अनिवार्य छ । यदि कुनै डाक्टरको स्वीकृतिविना नै औ’षधि किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाई स’मस्यामा पर्न सक्नुहुनेछ । अनुसन्धान एजेन्सीहरू ती मानिसहरूमाथि पनि मूल्याङ्कन गर्छन् । जसले गुगलबाट ओ’षधि किन्छन् ।
३.कसैको व्यक्तिगत खोज्नु :यस्तो कुनै जानकारी गुगलमा सर्च नगर्नुहोस् जसले अरूको आन्तरिक विषयमा सङ्केत गर्दछ । जस्तै (लोकेसन, अफिस र घर)को बारेमा सर्च नगर्नुहोस् । उदाहरणको लागि तपाई गाउँको लो’केसन त सर्च गर्न सक्नुहुन्छ तर प्रत्यक्ष एड्रेस हालेर गुगलमा सर्च गर्नु तपाईँका लागि खतरा हुनसक्छ ।
४.ब’म बनाउने तरिका :त्यस्तै कानुनले नि’षेध गरेका केही त्यस्ता कुराहरू पनि स’र्च गर्नु हुँदैन । पटक–पटक सर्च गर्दा तपाई स’मस्यामा पर्न सक्नुहुन्छ । अनुसन्धान एजेन्सीहरू तपाई माथि म’निटर गरिरहेका हुन्छन् ।
५. अनलाईन बैकिङ वेबसाइट-यदि तपाईलाई आफ्नो बैंकको वेबसाइट थाहा छ भने गुगलमा अनलाईन बैंकको यु’आरएल अर्थात वेभ ए’ड्रेस सर्च नगर्न सुझाव दिइन्छ । कतिपय अवस्थामा स्क्या’मर (इ’न्टरनेटमा ठ’गी गर्नेहरु) ले
बैंकको जस्तै मि’ल्दोजुल्दो वेभसाइट बनाएका हुन्छन् । यसको ठेगाना र लु’क्समा केही मात्र फरक हुन्छ । कतिपय बेला यस्तो नक्कली साइटमा यु’जरहरुले आफ्ना सं’वेदनशील सूचना टा’इट गर्छन् । त्यसबेला उनीहरु धो’काधडीको शि’कार बन्ने गर्दछन् ।
६. क’स्टमर केयर नम्बर-फ्रड र स्क्या’म गर्नेहरुले गुगलमा कम्पनीहरुका नक्कली क’स्टमर केयर नम्बर र वेब साइट देखाउने गर्दछन् । कतिपय घटनामा गुगलमा क’स्टमर केयर नम्बर सर्च गरेपछि फोनमा यु’जर्सलाई यस्ता ठ’गहरुले ठगेका छन् । कुनै पनि कम्पनीको कस्टमर केयर नम्बर गु’गलबाट खोज्नुको साटो सोझै उक्त कम्पनीको वेब पेजमा या फोनबाट कस्टमर केयरसँग सम्पर्क गर्नुपर्दछ ।
७. मोबाइल एप्स र सफ्टवेयर-यदि तपाईं आफ्नो स्मार्टफोनका लागि कुनै पनि एप्स वा सफ्टवेयर गुगलमा सर्च गरेर डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने यस्तो नगर्नुहोस् । सधैँ गुगल प्ले स्टोर या एप्पल एप स्टोरबाट मात्रै अपडेट गर्नुहोस् । गुगलमा सर्च गरेर भेटिने एप्सहरुमा मालवेयर अर्थात भाइरस हुन सक्छन् ।
८. फ्रि ए’न्टिभाइरस या सफ्टवेयर-इन्टरनेटका केही साइटहरुले आ’धिकारिक र सही प्रकारका यस्ता सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने सुविधा दिएका हुन्छन् । तर गुगलमा खोजेर कुनै पनि नचिनेको ए’न्टिभाइरस या सफ्टवेयर इन्स्टल नगर्नुहोला ।
कतिपय यस्ता सफ्टवेयर आफैमा भा’इरस हुन सक्छन् । कतिपयले सिस्टमलाई ध्व’स्त पार्न सक्छन् । सक्कली र नक्कली स’फ्टवेयरमा फरक छु’ट्याउनु पनि कठिन काम हो । त्यसैले सतर्क रहनुहोला । जे समस्या हल गर्न सफ्टवेयर खोजिएको हो, त्यही समस्या बढाउने सफ्टवेयर कतिपयले राखेको देखिन्छ ।
Prevआज प्रचण्ड, माधव र बाबुराम एउटै मञ्चमा उभिँदै !
Nextतालिबानद्वारा अफगानिस्तान-भारत सीमापार व्यापार बन्द